Wiemuhyɛn Gyinabea - Wikipedia
Wiemuhyɛn Gyinabea pronounciation of "Wiemuhyɛn Gyinabea" (help·info) yɛ bea nipa akwanfufoɔ ne nneɛma foro Wiemuhyɛn.
Sɛ yɛka sɛ Wiemuhyɛn Gyinabea a na ɛkyerɛ aerodrome wɔ borɔfo kasa mu a, ɛwɔ adan ne afaafa ahodoɔ beberee, ɛbinom wɔ hɔ a yɛde ma akwantufoɔ a wɔrefa wiemuhyɛn de atu kwan. Wiemuhyɛn Gyinabea biara wɔ nnoɔma ahodoɔ bi a ɛboa ne dwumadie bi te sɛ baabi a Wiemuhyɛn no tumi Gyina, ɛna ɛsane nso wɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ a control tower. Wiemuhyɛn Gyinabea biara nso yɛ baabi a sɛ wiemhyɛn bi firi soro reba fom a ɛdi kan kɔsi hɔ ansa na abɛgyina, a mpɛmpii no ɛyɛ kwan a wogyina so a wohunu wanim ntentensoɔ a, ɛhɔ na sɛ wiemhyɛn no rebɛtu akɔ soro foforɔ anaa sɛ ɛfiri soro nso rebɛsi fam nso a wɔfa anaa biribi a yɛfrɛ no sɛ helipad, na berɛ biara no control towers, hangars ne terminals ahodoɔ no nyinaa benbɛn no. Wiemhyɛn akɛseakɛseɛ no nyinaa wɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ airport aprons, taxiway bridges, air traffic control centres, passenger facilities bi te sɛ baabi a yɛdidi (restaurants) ɛne baabi a akwantufoɔ tena gye wɔn ahome (lounges), ɛna emergency services ahodoɔ. wɔ aman ahodoɔ bi so, titirew ne US man no, wɔn wiemhyɛn gyinabea ahodoɔ no nyinaa wɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ fixed-base operators baako anaa deɛ ɛboro saa, a ne dwumadie ne sɛ "serving general aviation".
Wiemhyɛn gyinabea ahodoɔ[sesa]
Wiemhyɛn gyinabea a ɛsom helicopters nko ara no yɛfrɛ no heliport. Wiemhyɛn gyinabea a seaplane ahodoɔ ne amphibious aircraft ahodoɔ fa hɔ no yɛfrɛ no seaplane base. Saa base a yɛreka ho asɛm yi wɔ stretch of open water for takeoffs ɛne landings, and seaplane docks for tying-up.
Wiemhyɛn gyinabea ahodoɔ a wiemhyɛn tumi tu firi hɔ kɔ ɔman foforɔ so no beberee no ara wɔ beaeɛ ahodoɔ pii de ma customsfoɔ ɛne passport control ɛna afei incorporating all the aforementioned elements. Saa wiemhyɛn no yɛhu no sɛ ɛyɛ rank among the most complex and largest of all built typologies, with 15 of the top 50 buildings by floor area being airport terminals.
↑ Wragg, D.; Historical dictionary of aviation, History Press 2008
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiemuhyɛn_Gyinabea&oldid=63198"
Nsesae ba kratafa yi so da 2 Ɔbɛnem 2022, mmere 22:47.